Ny hetsika fanabeazana an'i Apple dia manomboka amin'ny horonantsary "Ny olona iray dia afaka manova an'izao tontolo izao" | Avy amin'ny mac aho
Ny hetsika fanabeazana an'i Apple dia manomboka amin'ny horonantsary "Manova an'izao tontolo izao ny olona iray"
Ny keynote voalohany nataon'i Apple tamin'ny taona dia efa natomboka ihany. Amin'ity tranga ity dia tsy manana horonantsary mivantana momba ilay hetsika izahay, fa mampahafantatra anao ny zava-baovao rehetra asehon'i Apple mandritra ny tolakandro.
Ara-potoana dia natomboka tany Chicago ny hetsika. I Tim Cook tenany no niandraikitra ny fanokafana ny fihaonana tamin'ireo mpanao gazety sy olona mifandray amin'ny tontolon'ny Apple. Cook dia niresaka momba ny tantaran'i Apple nandritra ny 40 taona teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana.
Saingy satria ny sary rehetra dia mitentina teny arivo, toy ny fampidirana hitantsika a horonantsary manentana ny fanahy mitondra ny lohateny "Ny olona iray dia afaka manova an'izao tontolo izao". Cook dia manome lanja ireo ankizy feno famoronana, ka hatramin'ny iray ihany no afaka manova an'izao tontolo izao. Apple mametraka dia midika hoe manaitra ity famoronana ity, miaraka amin'ireo hetsika ho an'ireo ankizy kely ao amin'ny Apple Store mifandraika amin'ny fandrafetana programa robot, Sferos na gadget hafa izay manaitra ny fisainan'ny ankizy kely. Etsy ankilany, apetrany eo am-pelatanan'ny mpampianatra sy ny fampiharana ampahibemaso faobe hianarana Swift.
Ny zaza rehetra dia teraka feno famoronana tsy manam-petra. Nandritra ny 40 taona dia nanampy ireo mpampianatra hamoaka izany i Apple.
Cook ihany dia manamafy fa anio dia zava-dehibe kokoa ny fahalalana ny fandaharana raha tsy amin'ny fiteny faharoa, satria azo antoka fa hanokatra varavarana bebe kokoa rahampitso. Amin'ny fandraisana andraikitra toa ny Hour of Code, manampy ny mpianatra tsirairay handray tombony betsaka amin'ny fianarany izany.
Amin'ny ambaratonga eo an-toerana, Apple dia hamolavola ny fivorian'ny Martsa ho an'ny fiainantsika mandritra ny faran'ny herinandro, izay hamporisihana ny mpianatra amin'ny feony. Farany, asehonay anao ny horonantsary navoaka tamin'ny fiandohan'ny keynote.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny hetsika fanabeazana an'i Apple dia manomboka amin'ny horonantsary "Manova an'izao tontolo izao ny olona iray"
Ahoana ny fomba hamafana ho azy ny rakitra ZIP amin'ny Mac aorian'ny fitrandrahana